တရုတ်နိုင်ငံ ကျန်းကျားကျဲ Grand Canyon ချောက်ကြီးပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသော ဖန်တံတား - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ ကျန်းကျားကျဲ Grand Canyon ချောက်ကြီးပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသော ဖန်တံတား
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း Zhangjiajie Grand Canyon ပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသော ဖန်တံတားပေါ်၌ ကလေးငယ်တစ်ဦးထိုင်နေသည်ကို နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ကျန်းကျားကျဲ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း Zhangjiajie Grand Canyon ပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသော ဖန်တံတားပေါ်၌ လမ်းလျှောက်နေသော ခရီးသွားဧည့်သည်များကို နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း Zhangjiajie Grand Canyon ပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသော ဖန်တံတားပေါ်၌ သွားလာလှုပ်ရှားနေသော ခရီးသွားဧည့်သည်များအား နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း Zhangjiajie Grand Canyon ပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသော ဖန်တံတားမှတစ်ဆင့် ကြည့်ရှုနေသော ခရီးသွားဧည့်သည်များအား နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း Zhangjiajie Grand Canyon ပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသော ဖန်တံတားမှတစ်ဆင့် ဘန်ဂျီခုန်ခြင်း ပြုလုပ်နေသော ခရီးသွားဧည့်သည်တစ်ဦးအား နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဟူနန်ပြည်နယ်ရှိ ကျန်းကျားကျဲ Grand Canyon ချောက်ကြီး (Zhangjiajie Grand Canyon) ပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသော ဖန်သားတံတားသည် အရှည် မီတာ ၄၃၀၊ တံတားအကျယ် ၆ မီတာရှိပြီး မြေပြင်မှအထက် မီတာ ၃၀၀ ရှိ ချောက်ကမ်းပါးစွန်းနှစ်ခုအား ချိတ်ဆက်ကာ တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ကာ ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သော သုံးလွှာဖန်သား အချပ်ပေါင်း ၉၉ ချပ်ဖြင့် တံတားခင်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းဖန်တံတားပေါ်မှ ဘန်ဂျီခုန်ခြင်း (bungee jumping) လည်းပြုလုပ်နိုင်သဖြင့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများ စိတ်ဝင်တစားလည်ပတ်လေ့ရှိသော နေရာတစ်နေရာလည်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
In pics: glass-bottomed bridge at Zhangjiajie Grand Canyon
Source: Xinhua| 2021-11-13 07:21:51|Editor: huaxia
1- A baby sits onaglass-bottomed bridge at Zhangjiajie Grand Canyon, central China’s Hunan Province, on Nov. 12, 2021. The 430-meter long, six-meter wide bridge, linking two steep cliffs 300 meters above the ground, is paved with 99 panes of three-layer transparent glass. (Xinhua/Zhao Zhongzhi)
2- Tourists walk onaglass-bottomed bridge at Zhangjiajie Grand Canyon, central China’s Hunan Province, Nov. 12, 2021. The 430-meter long, six-meter wide bridge, linking two steep cliffs 300 meters above the ground, is paved with 99 panes of three-layer transparent glass. (Xinhua/Zhao Zhongzhi)
3- Aerial photo taken on Nov. 12, 2021 shows tourists playing on Zhangjiajie Grand Canyon’s glass-bottomed bridge, central China’s Hunan Province. The 430-meter long, six-meter wide bridge, linking two steep cliffs 300 meters above the ground, is paved with 99 panes of three-layer transparent glass. (Xinhua/Zhao Zhongzhi)
4- Tourists look throughaglass-bottomed bridge at Zhangjiajie Grand Canyon, central China’s Hunan Province, on Nov. 12, 2021. The 430-meter long, six-meter wide bridge, linking two steep cliffs 300 meters above the ground, is paved with 99 panes of three-layer transparent glass. (Xinhua/Zhao Zhongzhi)
5- Aerial photo taken on Nov. 12, 2021 showsatourist going bungee jumping from Zhangjiajie Grand Canyon’s glass-bottomed bridge, central China’s Hunan Province. The 430-meter long, six-meter wide bridge, linking two steep cliffs 300 meters above the ground, is paved with 99 panes of three-layer transparent glass. (Xinhua/Zhao Zhongzhi)
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိက အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဘလင်ကန်နှင့် ဆက်သွယ် ဆွေးနွေး
တရုတ်နိုင်ငံက နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး အရေအတွက် အများဆုံး ထောက်ပံ့ပေးသည့် နိုင်ငံ ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြော